ओलीसामु प्रचण्डको प्रश्न– यही कार्यशैलीले दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ? « News24 : Premium News Channel
ओलीसामु प्रचण्डको प्रश्न– यही कार्यशैलीले दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ?
काठमाडौं । आज बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा एकताका विवादित विषयमा छलफल हुने भन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको एकअर्काकाप्रतिको आशंका मेट्ने प्रयास मात्रै भएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्डले ओलीका सामु प्रश्न तेस्र्याए, ‘यही कार्यशैली हो भने त दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ? एउटा कार्यकारी, अर्को शेरेमोनियल त हुँदैन ?’ उनले वैचारिक राजनीतिक विषय के गर्ने र महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
कर नबुझाएसम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न-नगराउन ४ विद्यार्थी संगठनकाे आग्रह
चीनको सान्सी प्रान्तमा फहरायो नेपालको झण्डा
देश चलाउने पार्टीको रुपमा ‘फोरम नेपाल’ स्थापित– सहसराम यादव
access_time 4:49 pm
काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प, धरहरा पुनः निर्माण अभियान र धरहरा सम्बत बिषयक जानकारीमुलक
काठमाडाै‌ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माणको काम सक्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन
काठमाडौं, १२ बैशाख । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणः करिब चार हजार प्राविधिकहरुले आजैबाट लागू हुनेगरि सामूहिक